News - Development atụmanya nke iko biya na mmanya kalama ..
Karama a na-ejikarị arịa mee ihe na mmanya na-aba n'anya na ụlọ ọrụ ọ beụ ,ụ na-aba n'anya, nke nwere ike ịnọgide na-enwe kemịkal, enweghị ike na enweghị ike. Ọnụ ahịa ahịa nke karama iko na arịa dị na 2019 bụ 60,91 ijeri dollar US, nke a na-atụ anya iru dollar 77,255 US na 2025, na ọnụ ọgụgụ ngụkọta kwa afọ n'etiti 2020 na 2025 bụ 4.13%
A na-emegharị nkwakọba karama dị ukwuu, nke mere ka ọ bụrụ ezigbo nhọrọ maka ngwa nkwakọ ngwaahịa site na echiche gburugburu ebe obibi. Imegharị iko 6 nke iko nwere ike ịchekwa tọn 6 nke ihe onwunwe ma belata 1 tọn CO2.
Otu n'ime ihe ndị bụ isi na-ebute uto nke karama ahịa karama bụ mmụba biya biya n'ọtụtụ mba. Beer bụ otu n'ime mmanya na-egbu egbu juru na karama iko. Ọ nọ n'ọchịchịrịkaramaichebe ọdịnaya. Ọ bụrụ na ekpughere ihe ndị a na ọkụ ultraviolet, ha nwere ike ịka njọ. Na mgbakwunye, dị ka NBWA Industry Affairs na 2019, ndị ahịa gbara afọ 21 na karịa na United States na-eri ihe karịrị galọn 26.5 nke biya na onye ọ bụla kwa afọ.
Kalamabụ otu n'ime ihe nkwakọ ngwaahịa kachasị mma maka ihe ọ alcoụholicụ na-aba n'anya (dị ka mmụọ). Ikike nke karama iko iji jigide okpukpo na ekpomeekpo nke ngwaahịa na-achọ ihe. Ndị ahịa dị iche iche n'ahịa ahụ achọpụtala ịrị elu nke ụlọ ọrụ mmụọ.
Karama bụ ezigbo na-ewu ewu nkwakọ ihe maka mmanya. Ihe kpatara ya bụ na mmanya ekwesịghị ikpughere anyanwụ, ma ọ ga-emebi ya. Dabere na data OIV, imepụta mmanya n'ọtụtụ mba bụ 292.3 lita na atụmatụ afọ 2018.
Dị ka winetù mmanya mmanya magburu onwe ya nke United Nations si kwuo, anaghị eri anụ bụ otu n'ime usoro mmepe mmanya kachasị mma na ọsịsọ, nke a na-atụ anya na ọ ga-egosipụta na ịmịpụta mmanya. Nke a ga - akwalite ntoputa nke mmanya anaghị eri anụ ọzọ, yabụ achọrọ ọtụtụ karama iko.